marriage - Synonyms of marriage | Antonyms of marriage | Definition of marriage | Example of marriage | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for marriage
Top 30 analogous words or synonyms for marriage
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ Christian local churches and churches at large may FORBID interfaith marriage, basing this ban on New Testament verse
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ A non-Muslim person who wishes to marryaMuslim person must CONVERT to Islam before the marriage can be recognised as legally valid.A marriage between two non-Muslims (civil law marriages), however, will not become void after one spouse subsequently converts to Islam. A non-Muslim MUST CONVERT from his/ her religion to Islam in order for him/ her to marryaMuslim. He/ she must refer to the State Religious Department or seek help from an Imam at the nearest mosque in the area. After which, the same marriage procedures for Muslims apply.
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ(Interfaith Marriage Law ) ကို မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယက ပရိယတ္တိသာသနာဟိတ (သကျသီဟ) ဓမ္မာစရိယ ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူ နှင့် သံဃာများက၂၀၁၃ ခုနစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုမှုက ကာကွယ်ဖို့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာနန်းနိုင်ဖို့ ဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲ တင်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ ...ဘာသာ အသီးသီးမှာ သူတို့ဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ(Interfaith Marriage Law ) ပြဌာန်းချက် တွေ ရှိနေတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း အလားတူ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဒီလို ကာကွယ်ဖို့ ဆောင်ရွက်တာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ မဟုတ်ကြောင်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ဖို့အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ(Interfaith Marriage Law ) တရပ် ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ... ဟု အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဆန်း တောရ တပ်ဦးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဩဝါဒ ခံယူပွဲ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သံဃာ့အစည်းအဝေးတွင် အဓိက ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးစောင့် ဥပဒေ မူကြမ်းကို သံဃာတော် တွေရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရ ရေးဆွဲခဲ့သော ဥပဒေပညာရှင် ဦးရဲခေါင်ညွန့်ကလည်း... မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့အခါ တခြားဘာသာတွေရဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေ ကိုတော့ Statutary Law လို့ ခေါ်တဲ့ ပြဌာန်း ဥပဒေ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခံရပြီး မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်း ဥပဒေကို ကျတော့ Customary Law လို့ ခေါ်တဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအဆင့်သာ သတ်မှတ်တာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် သူများဘာသာရဲ့ ဥပဒေတွေကိုသာ လိုက်နာ နေရတယ်... ဟု ပြောပါသည်။The face of Buddhist Terror ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Time Magazine ကိုလည်း ဒီအစည်းအဝေးတွင် ရှုတ်ချခဲ့ကြပါသည်။ သီတဂူ ဆရာတော် အသျှင် ညာဏိသရ က ...အခုအခါ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လို နိုင်ငံတွေဟာ တချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ဆောင်းပါးရှင် Henna Beach က လစ်လျူရှုခဲ့ တယ်...လို့ ဆိုသည်။
ချန်ထွန်း၊ ဦး(ရခိုင်) လူးအလဲခံခဲ့ရသည်။ မိဘလက်ထက်မှ သူဘ၀တလျှောက်လုံး အပွဲပွဲနိုင်လာခဲ့သမျှ ဇနီးသည် Miss Cosgroves နှင့်ကျမှ ဒူးထောက်အရှုံးပေးခဲ့ရသောစစ်သူကြီး။ ဦးချန်ထွန်းနှင့် Miss Cosgroves တို့၏ အိမ်ထောင်ရေးသည် မည်ရွေ့မည်မျှအထိ အဆင်ပြေမပြေဆိုသည့် အတိုင်းအတာဒီဂရီကို စာရေးသူမသိပါ။ဦးချန်ထွန်းနှင့်ရခဲ့သော Miss Marie Chan Tun ကိုခေါ်ပြီး အင်္ဂလန်သို့ ပြန်သွားပါသည်။ သူသည် မြန်မာလူမျိုး ယဉ်ကျေးမှုကို အထင်သေးအမြင်သေးများစွာဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး နောက်ပိုင်း`The Marriage in Burma` ဟူသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ မကြာသေးမီက ကမာရွတ်၊ လှည်းတန်းရှိ အတ္တိယလမ်းတွင် နေထိုင်သော ဦးချန်ထွန်း ညီ ဦးရွှေသာမြေး ဘဏ်မန်နေဂျာဦးရွှေဖြူနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်မေးမြန်းကြည့်ရာ ထိုစာအုပ်ကလွန်ခဲ့သော(၃၀)ကျော်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှ ငှားရမ်း၍ သူကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖူးကြောင်း ပြောပြပါသည်။ စာရေးသူသည် Miss Cosgroves ရေးသားသောစာအုပ်ကို ပြန်လည်ချေပရေးသားရန် စာအုပ်ရေးသားသော အချိန်ထိ လမ်းသွားလမ်းလာအခွင့်ရတိုင်း လိုက်ရှာနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုမတူလျှင် ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ မိမိဘဝအတွက် တစ်သက်တာအိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်သောအခါ အထူးသတိထားရန် အချက်တချက်ဖြစ်သည်ကို ဦးချန်ထွန်း၏ကိုယ်တွေ့တစ်သက်တာက သင်ခန်းစာယူစရာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ The Matrimonial Law of Singapore is governed by two acts, the Muslim Marriages act (1966) which falls under the Administration of Muslim Law Act (AMLA) whereas the other is under the Women's Charter. Muslim marriages are solemnised and administered by the Registry of Muslim Marriages (ROMM) whereas the Civil Registry (ROM) governs the Women's Charter.Cross marriage ofaMuslim man to non-Muslim is NOT allowed. The non-Muslim bride must go for CONVERSION course. Rigorous interviews are made to the groom to ensure that he is fit to guide the new convert asawife and asafellow Muslim. Non-Muslim groom marriages are allowed only after 1 year of proper conversion courses.